အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တက်ပမ်းနေပြီ
Labels: diary, တီတီချမ်း
သူများရောဘဲ။ ပင်ပန်း ပြီး ယခုလက်ရှိအခြေအနေကိုငြီးငွေ့ လှပါပြီ။
အ လုပ်ခဏထွက်ပြီးနားချင်ပေမဲ့ လစာကောင်းတဲ့အလုပ်ပြန်မရမှာစိုးလို့မလုပ်ရဲဘူး။ အသက်လဲ ကြီးပြီကို။
ကိုယ်ကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ နေရတာ ငြီးငွေ့နေပြီ။ မနေချင်တော့ဘူး။
ပြန်ရင်လဲ ဘာလုပ်စားရမလဲ မသိတော့ ..
အားပေးတယ်တီ။ တီ့မှာ သားသမီးမရှိတော့ လွပ်လွပ်လပ်လပ် လုပ်လို့ရတယ်။
တီချမ်း February 26, 2012 at 12:26 PM
တကယ်ပြောတာ အလုပ် ကိုထွက်မယ် တနှစ်လောက်တော့ နားမယ် စာအုပ်ဘတ်မယ် နောက်ပျင်းလာတော့လဲ အလုပ်ပြန်ရှာတာပေါ့
Yin February 25, 2012 at 5:39 PM
I believe every one has the same feeling especially, we all who are working in foreign country. But we still need to work to support to our love ones. Don't give up and do not feel depress. We all are the same feeling.
You are so lucky that many ppl love U and admire U.
Do not decide and act so soon. Better think it twice before you decide.
တီချမ်း February 26, 2012 at 12:27 PM
already think twice and decided
yes money is important but sometime in life there are things fur more important than money
တီချမ်း February 26, 2012 at 12:28 PM
လန်းဆမ်း တက်ကြွနေဆဲပါ မမြကျေးရဲ့
I agree that we have this feeling working many years in overseas.
Either boring or stress we have.
But still have no choice.
ခရစ္စတလ် February 26, 2012 at 8:28 AM
မဲဆောက်ကို တိတ်တိတ်လေး သွားပြီ ပြန်လာပြီ ဟဲဟဲ
တီ့စိတ်ကူးနဲ့ အိုင့်အကြံအစည်ကတော့ နီးစပ်နေပြီ :P
တီချမ်း February 26, 2012 at 12:29 PM
ဘာသဘောလဲ ဒေါ်သလင်း သူများ အကြံအစည်တွေကို ခိုးဖို့ကြံနေတာလား ဟွင်း
ခရစ္စတလ် February 26, 2012 at 3:21 PM
အကြံတူရင် နောက်လူသာစမြဲတဲ့ တီ
တီချမ်း February 26, 2012 at 3:28 PM
အော် ဒီလိုလား နောက်ကို အိုင်ဒီယာတွေ လုံးဝ လုံးဝ မပြောပြတော့ဘူး လူဆိုးမကြီးရဲ့ ဟွန့်
ညနေဈေးတန်းလေးကိုပတ်ပြီး ညနေစာဝယ်ဖို့ လိုက်ကြည့်မိတယ်။ ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုတာ ရှားပါးလိုက်တာလေ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်စီးမိတော့လဲ ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းကလဲ ကိုယ့်ဂီတမဟုတ်၊ ဘေးနားမှာပြောနေကြတာကလဲ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ စကား။ ကျွန်တော်လဲ တီ့လိုပဲ အရမ်းညည်းငွေ့မိနေပြီဗျ။ (မနက်ဖြန် မန်းဒေး ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးး)
တီပျော်ရွှင်ပါစေ။ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လမ်းအသစ်မှာလဲ အောင်မြင်ပါစေ။ (အားရင် တနေ့ ပိုစ့်တစ်ခု တင်ရမယ်ဆရာ။)
တီချမ်း February 26, 2012 at 11:11 PM
ပုံမှန်လာဘတ်မယ် ဆိုရင် ရေးမှာပေါ့ ခြင်္သေ့လေးရယ်
Leo February 27, 2012 at 8:38 AM
နေ့တိုင်းလာဖတ်ပါတယ် တီရ။ ကွန်မန့်သာ မချန်ဖြစ်တာပါ။
အမည်မသိရှေးစာဆိုများကို လက်မခံတော့ပါဆိုသောကြောင့် အကောင့်ဖြင့် မန့်သွားပါသည်။